သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် အလေ့အကျင့်(၄)ခု – Gentleman Magazine
အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ မရှိဘူးဆိုရင် ဘ၀က ပိုမိုခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဘ၀ကို အလွယ်တကူဖြတ်သန်းမလား ဒါမှမဟုတ် သက်ဆောင့်သက်သာနေပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။
အောင်မြင်သူတိုင်းကတော့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ထက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုပဲ ပျိုးထောင်တတ်ကြပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ဘာမှအကျိုးမထူးဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ရေရှည်မှာ အကျိုးရှိလာမှာ သေချာပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေအားလုံးက တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေပြီး သင်လိုချင်တဲ့အရာ၊ ဖြစ်ချင်တာကို စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ စိတ်ကျေနပ်တဲ့ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းအားပြည့်ဝစေတဲ့ အလေ့အကျင့်(၄)ခုကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘ၀ကို လက်ခံလိုက်ပါ။ မဆန့်ကျင်ပါနဲ့။
ဘ၀မှာ ထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါ အရွဲ့တိုက်ဆန့်ကျင်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆန့်ကျင်မယ့်အစား ဘာကြောင့် ဘာတွေအလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ဖို့ အချိန်ယူလိုက်ပါ။ ဒီအချက်တွေက အဖိုးတန်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ါပတယ်။ အမြဲတမ်းပုံမှန်လည်ပတ်နေရာကနေ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ တမူထူးခြားတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ မြင်တတ်တွေးတတ်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘ၀ကို လက်ခံပါ။ မဆန့်ကျင်ပါနဲ့။
၂။ မိမိကိုယ်ကို အားပေးပါ။ မနှိမ့်ချပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆင့်နိမ့်ကျစေတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ မေးခွန်းမှားတွေ မေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမှားတွေက စိတ်ဓာတ်အင်အားကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ကို မကောင်းတဲ့ဖက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်…
မေးခွန်း။ ။ ဘာလို့ ငါ ကိုယ်အလေးချိန် မလျော့နိုင်ရတာလဲ
အဖြေ ။ ။ မင်းက ၀က်တစ်ကောင်လို့ ၀နေလို့။
မေးခွန်း။ ။ ဘာလို့ ငါ ဒါတွေကို အဆင်ပြောအောင် မလုပ်နိုင်ရတာလဲ
အဖြေ။ ။ မင်းက ဘာမှမတတ်လို့ပေါ့။
မေးခွန်း။ ။ ငါ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်မွဲနေရတာလဲ
အဖြေ ။ ။ မင်းက သောက်သုံးမကျလို့
အထက်ပါအတိုင်း မေးခွန်းအမှားတွေ၊ မကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးမယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့အဖြေတွေပဲ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မသိစိတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုရင်….
ငါ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့နိုင်ဖို့ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာတွေက ဘာတွေလဲ။
ဒီကိစ္စကို ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ။
ငါ့ဝင်ငွေ ပိုကောင်းလာအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ စသဖြင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့မေးခွန်းတွေက သင့်ကို ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အဖြေတွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဦးနှောက်ကို သုံးပါ။ အပြစ်မတင်ပါနဲ့။
အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး လွဲချော်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက် တစ်ခုခုကို အပြစ်တင်တာဟာ ကျွန်တော်တို့အမှားမဖြစ်အောင် ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အပြစ်တင်တာဟာ နာကျည်းချက်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေက ပြီးသွားပါပြီ။ ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် လက်ရှိအချိန်ကို ထိခိုက်မခံပါနဲ့။ ဒီလိုဖြစ်နေမယ့်အစား နောက်တစ်ခါ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ ဦးနှောက်ကိုသုံးပြီး အဖြေရှာပါ။ အတိတ်ရဲ့ အကျဉ်းသားအဖြစ်မခံပါနဲ့။ အနာဂတ်ကို ဦးဆောင်လိုက်ပါ။
၄။ တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အကုန်လုံးလျှောက်မလုပ်ပါနဲ့။
လုပ်စရာရှိတာတွေထဲက အရေးကြီးတာတွေကို အရင်လုပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လုပ်စရာ(၁၀)ခု ရှိနေပေမယ့် ပထမဆုံး(၂)ခုကို လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကျန်တာတွေပါ ပြီးသွားတတ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေးကြီးတာကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် အလုပ်တွေပြီးမြောက်ပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ရရှိမှာပါ။ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေဟာ အလုပ်များကြပေမယ့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဘာမှ အလောသုံးဆယ်နဲ့ ပျာယာခတ်နေတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အရာအားလုံးကို လျှောက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ့်အစား အရေးကြီးတာကိုပဲ ဥိးစားပေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သငျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲစနေိုငျသညျ့ အလအေ့ကငျြ့(၄)ခု
အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှေ မရှိဘူးဆိုရငျ ဘဝက ပိုမိုခကျခဲနတေတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှာ ရှေးခယျြစရာရှိပါတယျ။ မိမိကိုယျကို လကေ့ငျြ့ပေးပွီး ဘဝကို အလှယျတကူဖွတျသနျးမလား ဒါမှမဟုတျ သကျဆောငျ့သကျသာနပွေီး ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ဘဝကို ရငျဆိုငျမလားဆိုတာပါပဲ။
အောငျမွငျသူတိုငျးကတော့ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ဘဝထကျ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှကေိုပဲ ပြိုးထောငျတတျကွပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ ဘာမှအကြိုးမထူးဘူးလို့ ထငျရပမေယျ့ ရရှေညျမှာ အကြိုးရှိလာမှာ သခြောပါတယျ။ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှအေားလုံးက တူညီတဲ့သကျရောကျမှုမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ ယုံကွညျမှုကို အားကောငျးစပွေီး သငျလိုခငျြတဲ့အရာ၊ ဖွဈခငျြတာကို စှမျးဆောငျနိုငျဖို့ စိတျကနြေပျတဲ့ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးနိုငျဖို့အတှကျ စှမျးအားပွညျ့ဝစတေဲ့ အလအေ့ကငျြ့(၄)ခုကို အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘဝကို လကျခံလိုကျပါ။ မဆနျ့ကငျြပါနဲ့။
ဘဝမှာ ထငျထားသလိုဖွဈမလာတဲ့အခါ အရှဲ့တိုကျဆနျ့ကငျြခငျြစိတျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ဒီလိုဆနျ့ကငျြမယျ့အစား ဘာကွောငျ့ ဘာတှအေလုပျမဖွဈခဲ့တာလဲဆိုတာကို သုံးသပျဖို့ အခြိနျယူလိုကျပါ။ ဒီအခကျြတှကေ အဖိုးတနျပါတယျ။ အခကျအခဲတှကေို စဉျးစားတှေးချေါပုံ ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ အသုံးပွုနိုငျါပတယျ။ အမွဲတမျးပုံမှနျလညျပတျနရောကနေ အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ တမူထူးခွားတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ မွငျတတျတှေးတတျလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘဝကို လကျခံပါ။ မဆနျ့ကငျြပါနဲ့။
၂။ မိမိကိုယျကို အားပေးပါ။ မနှိမျ့ခပြါနဲ့။
ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အဆငျ့နိမျ့ကစြတေဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုကတော့ မေးခှနျးမှားတှေ မေးတာပဲဖွဈပါတယျ။ မေးခှနျးမှားတှကေ စိတျဓာတျအငျအားကို လြော့ပါးစပေါတယျ။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့စိတျကို မကောငျးတဲ့ဖကျကို ပွောငျးလဲစနေိုငျပါတယျ။ ဥပမာပွောရမယျဆိုရငျ…
မေးခှနျး။ ။ ဘာလို့ ငါ ကိုယျအလေးခြိနျ မလြော့နိုငျရတာလဲ
အဖွေ ။ ။ မငျးက ၀ကျတဈကောငျလို့ ၀နလေို့။
မေးခှနျး။ ။ ဘာလို့ ငါ ဒါတှကေို အဆငျပွောအောငျ မလုပျနိုငျရတာလဲ
အဖွေ။ ။ မငျးက ဘာမှမတတျလို့ပေါ့။
မေးခှနျး။ ။ ငါ ဘာဖွဈလို့ ဒီလောကျမှဲနရေတာလဲ
အဖွေ ။ ။ မငျးက သောကျသုံးမကလြို့
အထကျပါအတိုငျး မေးခှနျးအမှားတှေ၊ မကောငျးတဲ့မေးခှနျးတှေ မေးမယျဆိုရငျ မကောငျးတဲ့အဖွတှေပေဲ ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မသိစိတျအလုပျလုပျတဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မှနျကနျတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ဘယျလိုမေးရမလဲဆိုရငျ….
ငါ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့နိုငျဖို့ ပထမဆုံးလုပျရမှာတှကေ ဘာတှလေဲ။
ဒီကိစ်စကို ပိုကောငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျလို့ ရနိုငျမလဲ။
ငါ့ဝငျငှေ ပိုကောငျးလာအောငျ ဘာတှလေုပျသငျ့လဲ စသဖွငျ့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့မေးခှနျးတှကေ သငျ့ကို ခှနျအားဖွဈစမေယျ့ အဖွတှေပေေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၃။ ဦးနှောကျကို သုံးပါ။ အပွဈမတငျပါနဲ့။
အဆငျမပွဖွေဈပွီး လှဲခြျောသှားတဲ့ကိစ်စတဈခုအတှကျ တဈခုခုကို အပွဈတငျတာဟာ ကြှနျတျောတို့အမှားမဖွဈအောငျ ဆငျခွပေေးတတျတဲ့ စိတျကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အပွဈတငျတာဟာ နာကညျြးခကျြတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ပွီးခဲ့တာတှကေ ပွီးသှားပါပွီ။ ထိနျးခြုပျလို့ မရနိုငျတော့ပါဘူး။ အတိတျကဖွဈရပျတှကွေောငျ့ လကျရှိအခြိနျကို ထိခိုကျမခံပါနဲ့။ ဒီလိုဖွဈနမေယျ့အစား နောကျတဈခါ ဒီလိုမဖွဈစဖေို့ ဦးနှောကျကိုသုံးပွီး အဖွရှောပါ။ အတိတျရဲ့ အကဉျြးသားအဖွဈမခံပါနဲ့။ အနာဂတျကို ဦးဆောငျလိုကျပါ။
၄။ တဈခုခုလုပျပါ။ အကုနျလုံးလြှောကျမလုပျပါနဲ့။
လုပျစရာရှိတာတှထေဲက အရေးကွီးတာတှကေို အရငျလုပျတတျဖို့ လိုပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော လုပျစရာ(၁၀)ခု ရှိနပေမေယျ့ ပထမဆုံး(၂)ခုကို လုပျလိုကျရုံနဲ့ ကနျြတာတှပေါ ပွီးသှားတတျတာမြိုး ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အရေးကွီးတာကို အာရုံစိုကျလုပျဆောငျပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ အလုပျတှပွေီးမွောကျပွီး အဆငျပွခြေောမှတေဲ့ နရေ့ကျတှကေို ရရှိမှာပါ။ ဘဝမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့သူတှဟော အလုပျမြားကွပမေယျ့ ထိနျးသိမျးနိုငျကွပါတယျ။ ဘာမှ အလောသုံးဆယျနဲ့ ပြာယာခတျနတောမြိုး မရှိပါဘူး။ ဒီလိုလုပျနိုငျဖို့အတှကျ အရာအားလုံးကို လြှောကျလုပျဖို့ ကွိုးစားနမေယျ့အစား အရေးကွီးတာကိုပဲ ဥိးစားပေးတတျဖို့ လိုပါတယျ။
Previous: Colonel Sanders သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုအတွက် နောက်ဆုံးအချိန်မရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သူ
Next: အသက်(၃၀)ကျော်မှာ ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေစေဖို့ (၂၀)ကျော်အရွယ်မှာ လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာများ